ebe ọ bụ na 2001, M ji ọtụtụ ihe onwunwe ike ma na-enwe a website. Ụfọdụ n'ime ihe onwunwe e depụtara n'okpuru ebe.
HTML na CSS editọ
Tweets site @HunterThinksCom
Ugbu a, na m na-eji WordPress, Notepad ++ bụ m bụ isi nchịkọta akụkọ.
M na-eji nkenke oge na-eji bluefish. Ọ bụ free na ike idezi otutu asụsụ, ma ọ mkpọka mgbe nile na ọ na-apụghị aka ogologo edoghi nke ederede. M nkè m HTML enweghị aka ike akara oge izu, otú bluefish ọdọhọde banyere akara ogologo nke m ndị m na peeji nke. Ọ nwere ụfọdụ ndị magburu onwe atụmatụ na ọ dị mfe hazie ọtụtụ modul.
maka 12 afọ, M na-eji otu mbipụta AceHTML Freeware. M na-eji ya maka na ogologo n'ihi na m Switched ọrụ, na achọghị m chọta a ọhụrụ nchịkọta akụkọ. Plus, ọ na-arụ ọrụ: ọ dị mma karịa Windows Notepad.
N'akụkụ aka nke ọzọ, mgbe ụfọdụ Windows Notepad bụ ndị kasị mma nhọrọ. Kasị editọ ga-akpagbu na ihe 85KB file na-enweghị akara oge izu, ma Notepad adịghị eche. M adịkarịghị na-eji ya, ma ọ bụ ihe dị oké mkpa na ngwá ọrụ.
HTML ihicha, tidying, na-agba
Album colophon na calligraphy
Warara HTML Tags na Zubrag.com. Idetuo na mado koodu ma ọ bụ tinye a URL. Optionally ekwe ụfọdụ ọcha ka gaghị anapụ. Ndenye; mfe.
Warara HTML àgwà si HTML ihe na / ma ọ bụ warara HTML ọcha site Jeff Baker. Kama na-agba niile HTML ọcha, a na-echebe kasị bara uru ọcha ma ewepu àgwà niile ọcha. Otu ihe mere m na-eji ngwá ọrụ a bụ iji wepụ jọgburu àgwà na Microsoft Office ngwaahịa (okwu, Excel, OneNote) fanye n'ime html, htm, na mht akwụkwọ. Simple, mma omenala nhọrọ, na ngwa ngwa.
Wepụ niile URLs site na HTML (ederede) faịlụ na AddrView.
HTML Formatter na FreeFormatter.com-enye gị ohere input koodu site oyiri / tapawa ma ọ bụ URL. Ọ na-adịghị gbanwee koodu ma ọ bụ ederede, ma ọ reformat ihe niile na mfe na-agụ akara oge izu na indentation. Nnọọ ole na ole nhọrọ, ma dị mfe na ngwa ngwa.
&HTMLEntities.net; ngwa ngwa-ebu ụzọ amata ma ọ bụ decodes HTML entities gị ederede ma ọ bụ URLs.
Notepad ++ jikọtara na abụọ plugins nwere ike ngwa ngwa na ike ịgbanwe akwụkwọ na ọtụtụ ụzọ. wụnye TextFX ruo ọtụtụ narị ngwaọrụ. wụnye Tidy2 maka ike, ukwuu configurable akakabarede na tidying.
GIMP: GNU Image Jisie Program bụ otu nke kasị mma freeware mmemme mgbe—na ihe ọ bụla Atiya.
Microsoft Office Foto Manager bụ ihe ijuanya dị ike ma dị mfe iji. Ọ bụrụ na ị maara a dị nta banyere ihe dị iche iche njikwa, mgbe ahụ, ọ bụ ihe adaba karịa itinye a full fụọ foto nchịkọta akụkọ.
Wuru na-webcam: adaba ma jọrọ njọ.
TinyPNG bụ unfrickenbelievably ịtụnanya na compressing PNG files, na dị ka a bonus, ọ na-ewepu metadata na nzuzo agbakwunyere data.
Greenshot bụ a ọkaibe screenshot ngwá ọrụ na-enye gị ohere iji gbanwee (ka annotate, gburugburu, blur) oyiyi ahụ na-azọpụta ya na mpaghara ma ọ bụ bulite ya ọtụtụ dị iche iche ọrụ.
Ọ bụghị ma categorized
Ịmepụta na edemede tupu ya ekee a ndepụta achọ ịrịba ibu ụzọ chebara. M na-eji mfe usoro: etinye ihe ebe a ruo mgbe m na-eche dị na-eme ka a na udi nke ụfọdụ n'ime ha.
Microsoft Okwu: ya nwere mma mkpoputa na asụsụ checkers, ya mere mgbe ụfọdụ ndị kasị mma echiche maka àgwà drafting bụ ịmalite na Okwu, oyiri na pasting dị ka larịị ederede, mgbe na-akanye na-elu-ederede. Ọzọkwa, na Chọta na Dochie atụmatụ Okwu bụ mkpokọta dị ike dị ka mgbe nile okwu, ma interface bụ nnọọ mfe ịghọta.
Notepad ++ bụ nanị egwu. M na-eji ya maka ọtụtụ ihe na-akọwa, na m na-achọ ndị HTML plugins bu mma na m nwere ike ime ka nke a m bụ isi HTML nchịkọta akụkọ.
bit.ly: ebelata URLs, ùkwù URLs maka nkekọrịta ma ọ bụ oji onwe, track clicks on kpọmkwem njikọ, na-ahụ ma ọ bụrụ na onye ọ bụla ji bit.ly ịkọrọ a page na gị na saịtị.
microsoft Excel: eji ya na-ọcha data, wepụ data, na concatenate data. M na-eji ya, ọmụmaatụ, wuo ndepụta na a index page.
Wuo ndepụta na bu ụzọ page, M mkpa a ndepụta nke faịlụ aha, na Windows iwu ozugbo bụ ka a bara uru ngwá ọrụ. Ọ bụrụ na m nwere oge, M ga-amụta Power Shell, oke.
Microsoft Windows file Njirimara nchịkọta akụkọ enye gị ohere iji ngwa ngwa na n'ụzọ dị mfe wepu metadata si faịlụ nke mere na ị nwere ike kpuchido nzuzo gị. Right pịa a file, họrọ Njirimara, pịa nkọwa, ma na-agụ nhọrọ.
Soft Hyphenator na-ewe gị HTML, ederede, na asụsụ, na-agbakwụnye na adụ hyphens. M na na na na otú adụ-hyphens ga-emetụta Google Translate, ma ọ na-eme m English-asụsụ peeji prettier.
nnọọ – Chọta na-eji dochie na-enyocha maka faịlụ na-enye gị ohere ịnyegharị ha, ma ọ bụ kasị bara uru, chọta na-eji dochie n'ime faịlụ ikpo. Ọ bụ incredibly dị ike n'ihi REGEX, ma ka na-mara mma dị mfe iji. The akwụkwọ bụ mma (ma ọ bụghị oké) na ọ bụrụ na ị na-adịghị a REGEX ukwu (tupu m malitere iji nnọọ, M egwu na REGEX), i nwere ike eleghị anya fumble gị site na usoro na-eme ụfọdụ ịrịba ọrụ. Ihe omume na-ewe a ogologo oge Ibu Ibu, ma ya, ya mee ọtụtụ puku mgbanwe puku faịlụ na-enwusi gbapụrụ ọsọ. Warning: M ikadaha oge iji gosi na ndị na-esonụ omume ahụhụ, ma ọ nwere ike idi. M ukwuu n'ime iji nnọọ na HTML faịlụ. My onye mmasị maka formatting HTML faịlụ bụ itinye </html> n'ahịrị ikpeazụ nke faịlụ, naanị, na enweghị a oghere akara mgbe ọ na. M kwere na mgbe ụfọdụ mgbe m na-agba ọsọ nnọọ, ọ ga-eyipụ n'ahịrị ikpeazụ nke ederede na-ahapụ a oghere akara. Ya mere, M nwere ọtụtụ narị faịlụ enweghị a mmechi </html> na mgbe ahụ malitere adịkwa emechi ahu ọcha. M kwukwara a oghere akara (na REGEX r n) na njedebe nke ọ bụla faịlụ, na nsogbu kwụsịrị. Ọ nwere ndị ọzọ jụụ atụmatụ, dị ka okodorode niile oghere e si faịlụ ndị ahọrọ (ma e wezụga n'ihi na nke ikpeazụ akara!) ma ọ bụ wepụ na-eduga na trailing whitespace. ma, ya nwere manụ quirk: ọ bụrụ na ọ ga-emepe a file wepụ whitespace ma ọ bụ mmezi edoghi, ọ na-agbanwe na faịlụ mgbanwe ụbọchị ọbụna ma ọ bụrụ na ọ dịghị agbanwe agbanwe ihe ọ bụla.
Text Analysis site AlchemyAPI
Ya mere ọtụtụ Microsoft ngwaahịa?
N'ihi na ọ bụ ihe m nwere na nke ahụ bụ ihe m ugbu a ka na-eji. M nwere MCSE site n'oge ochie, ya mere m ihe ọmụma nke Microsoft ngwaahịa bụ miri na wider karịa nkezi ọrụ. Ọzọkwa, m ihe ọmụma nke ndị ọzọ sistem bụ ogbenye zuru ezu na-esiri m eji ha. Inertia dị ike, n'ihi ya, Microsoft sistem. Adịghị m paireti software, otú ahụ ka m nwere iji ngwaọrụ dị ka m, nke bụ ya mere m na-eji ihe dị ka Microsoft Office Foto Manager.
Categories Enyemaka Tags Google, Nzuzo, WordPress post igodo
Ọrịa dị ka ọdịda akụrụ